Fanamarinana Visa araho ny dingana 3 ho an'ny nofinofinao ao amin'ny UAE
Hanao masoivoho ny Emira Arabo Mitambatra mankasitraka ny visa ho fampiharana? Hamarino izao!
Fanamarinana Visa - Te hampahafantatra anao izahay izay efa nahazo fiainana vaovao Dubai!
Manana ny fanamarinana ny Visa ianao any Dubai!
Zahao ny fahazoan-dàlana ho an'ny sata visa ao Dubai!
Mila mandeha miaraka amin'ny Fianakaviana aho
Manana safidy ianao hifindra amin'ny fianakavianao any Dubai
Kaody paositra / ZIP
Sarin'ny pejin'ny pasipaoranao (Sary an'ny finday)
Ny laharan'ny karatrao (fahazoan-dàlana amin'ny pasipaoro na ny mpamily)
Ampidiro fotsiny ny isa
Safidio ny toerana tianao indrindra:
Serivisy Visa (azafady misafidiana ny iray amin'ireto safidy manaraka ireto)
$ 29.99 Visa + Fikarohana asa ao anatin'ny 60 andro + Varotra vola miverina
$ 19.99 Visa Application + Garantitra ho an'ny asa
$ 9.99 Visa Application + Fanamarinana
Hamarinina amin'ny Visa sy Asa any amin'ny Emira Arabo Mitambatra ianao.
* Azafady tsindrio avy eo ary avereno ny antsipiriany miaraka amin'ny fampahalalana momba ny fandoavana ny fahazoan-dàlana Visa & Passport. Ianao, Hatao, voamarina noho ny Visa ary miasa any amin'ny Arabie Arabo Emirates.
Ohatra ny sarin'ny pasipaoronao Frontside (pasipaoro)
Ohatra an'ny Visa navoaka tao amin'ny Emirà Arabo Mitambatra
Fanamarinana Visa mankany Dubai
Famindrana any Dubai - Inona no manaraka?
Ankehitriny: Aorian'ny fandinihana ny antsipirihany dia haniraka aminao ny taratasim-baovao misimisy kokoa aminao ny ekipanay, koa azafady, alao antoka fa hanadino ny mailaka isan'andro ianao fampahalalana famindrana. Alohan'ny hanohizanao antoka fa efa nampiditra ny antsipiriany rehetra amin'ny tranokalan'ny orinasa izahay. Tsy misy afa-tsy ny dingana 3 izay tokony harahinao, manamarina ny mombamomba anao, mampiditra CV ary avy eo mila ilainao antoka ianao fa ho voaro amin'ny asan'ny United Arab Emirates ianao. Etsy ankilany, eto izahay hanampy anao amin'ny sidina mankany Dubai sy mihoatra ny 100% antoka izahay fa hiakatra any Dubai.
Azafady zahao ny mailakao!
Fampahalalana pasipaoro UAE
Ekenay tokoa ny fampahalalana azonay avy aminao Dubai City Company ho an'ny Visa Lottery any UAE.